Sanaag: Bilowga Diiwaangelinta, Eedda Xukuumadda & Kulmiye, Hanjabaadda Ucid, Difaaca Waddani Iyo Jawaabta Cali Guray - Wargane News
Home Somali News Sanaag: Bilowga Diiwaangelinta, Eedda Xukuumadda & Kulmiye, Hanjabaadda Ucid, Difaaca Waddani...
Sanaag: Bilowga Diiwaangelinta, Eedda Xukuumadda & Kulmiye, Hanjabaadda Ucid, Difaaca Waddani Iyo Jawaabta Cali Guray
Iyadoo ay diiwaangelinta Cod-bixiyeyaasha doorashooyinka Somaliland Sabtida maanta si rasmi ah uga bilaabmayso gobolka Sanaag, ayaa Xisbiga Mucaaradka ah ee WADDANI ay Xukuumadda iyo Xisbigeeda KUKLMIYE ku eedeeyeen Anshax-jebin iyo Olole inuu ku kacay markii Wefti Xisbigaas ka socdaa gaadheen Ceerigaabo iyo deegaannada ka sokeeya. Hase-yeeshee, WADDANI ayaa deedifeeyey eedayntaas.
Badhasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falaay, ayaa arrintaas ka hadlay, isla markaana labada Xisbi ee kale ugu baaqay inaanay ku dayannin Tallaabooyinka Xisbiga WADDANI, waxaanu sheegay inay Xukuumad ahaan il-dhaw ku eegi doonaan tallaabooyinka Xisbiyada maaddaama oo aan olole doorasho wakhtigiisii la gaadhin, iyadoo go’aan ka gaadhista ficillada Xisbiyada ay masuul ka yihiin Guddiga doorashooyinka Qaranka iyo Guddiga Anshaxa ee arrimaha doorashooyinka iyo diiwaangelinta.
“Waxaan codsanayaa Axsaabta Qaranku inay anshaxa ilaaliyaan, annagu ma doonayno haddaannu Xukuumadda nahay inaannu cidna ku dhacdhacno, waayo? Maanta Cod-bixintii maaha. Axsaabta se waxaannu leenahay Anshaxa ilaaliya walaallayaal, wixii maalintii dhawayd dhacay oo kale yey dhicin, sababta oo ah olole ma furna, wixii dhacay way dhaceen, qolada Komishanka Qaranka ayey u taallaa iyo Guddiga Anshaxa, waxaanse leeyahay labada Xisbi ee kale ha ilaaliyaan, qoladii hore hadday ku daydaan inshayadu way aragtaa.” Sidaa ayuu yidhi Guddoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falaay.
Guddoomiyaha Golaha Dhexe ee Xisbiga Mucaaradka ah ee WADDANI Cismaan Afgaab Nuur, ayaa isaguna halkaas ka hadlay, waxaanu yidhi; “Qolada KULMIYE iyo Badhasaabkooda waxa iskaga qaldamay dadka in lala hadlo inaanay Anshaxa ka hor-imanayn. Anshaxa kuma jirto dadka inaan lala hadal, Shacabka in la wacyigeliyo waa arrinta ay Xisbiyadu meesha u marayaan, dadka la doonayo in la diiwaangeliyo waa in lala hadlo oo lala kulmo, waa arrin ay Xisbiyadu ka caawinayaan Guddiga doorashooyinka in dadka la wacyigeliyo. Xisbiga WADDANI Anshaxa ma jebin, mana jebin doono haddii Illaahay yidhaahdo.”
Muxumed Aw Cabdi oo u hadlay Xisbiga KULMIYE, waxa uu yidh; “Xisbi aannu halkan ka macagacawnay oo aannu nidhi WADDANI baa waxaa sameeyey ma jiro, waxaannu nidhi anshaxa halla ilaaliyo, maalintii dhawayd wixii halkan ka dhacayna waa ogeydeen. Markaa, in anshaxa la ilaaliyo waa lagama maarmaan, gobolkan in xasaasiyadda laga ilaaliyana waa lagama maarmaan, markaa, waxaan leeyahay maalintii dhawayd wixii dhacay dhece ee saaxiibkay Cismaan (WADDANI) ta dambe uun ka waantoow baannu leenahay.”
Gebo-gabadii Jiir Cali Madoobe oo ka tirsan Xisbiga Mucaaradka ah ee UCID, ayaa isaguna halkaas ka hadlay, waxaanu soo jeediyey in la kala diro Guddiga Anshaxa. “Annagu waxaannu sheegaynaa Guddiga anshaxu haddii ay shaqayn waydo in la kala diro ayaannu farriin ahaan u diraynaa. Waxa la soo maray Afar Gobol oo hore, afarta gobolba hawshani way ka socotay, wax alla wax laga qabtayna ma jirto, kan (Sanaag) haddii lagu darana, waxaannu caddaynaynaa oo aannu ku guubaabinaynaa in la kala diro Guddiga Anshaxa.” Sidaa ayuu yidhi Jiir Cali Madoobe.
Dhanka kale Gudoomiye xigeenka sadexaad ee Ucid Cali Maxamed Yuusuf(Cali Guray) oo HCTV wax ka waydiiyay in xisbiyada siyaasadu olole siyaasadeed u bedeleen diiwaangelinta Sanaag, wuxuu ku jawaabay oo uu yidhi; “ Xisbiga Waddani waqtiga uu tegay Sanaag ma odhan karo waxay ahayd xilligii diiwaangelinta, diiwaangelinta marka rasmi loogu dhawaaqay waa maanta(shalay), markaa wixii ka dambeeyaa ayaan la ogolayn, laakiin wixii ka horeeyay ciddii iska dhoolatusanaysa, ee taageeraddeeda isku hubta ee dhoolatusanaysaa haday diiwaangelintu intaanay bilaabmin shaaca qaado, maaha wax aad loola yaabo. Markaa waynu arkaynayoo xisbiga Sanaag ka hilaacay waa xisbiga Waddani, weliba meelo aan la filayn oo la filayay in Kulmiye gacanta sare ku leeyahay, fariinta ay Kulmiye u soo direen waxa weeye hana haybsan, markaa waddani waan ku hambalyaynayaa inay shaqaysteen oo ay taageerada intaa le’eg ka kasbaan.”
15-ka bishan July 2016-ka oo Sabtida Maanta ku beegan, ayaa loo muddeeyey bilawga diiwaangelinta Cod-bixiyeyaasha ee gobolka Sanaag oo noqonaya gobolkii Afraad ee laga qabanayo diiwaangelinta Cod-bixiyeyaasha sida lagu Daah-furay Ceerigaabo. 196 Goobood ayaa la qorsheeyey inay Sabtida Maanta ka bilaabanto diiwaangelintu, kuwaasoo ka kooban degmooyinka iyo Tuulooyinka guud ahaan gobolka Sanaag, taasoo socon doonta illaa badhtamaha bisha soo socota haddii Illaahay yidhaahdo sida ay Guddiga doorashooyinku u qorsheeyeen.
Somaliland: Xildhibaan Ibraahin Mahdi Buubaa Oo Ka Hadlay Warar Sheegaya In Laga Qaaday Xilkii Afhayeenka Xisbiga Wadani
Somaliland: Siyaasiyiinta Madasha Wata Tashiga Oo Ka Hadlay Khilaafka Gollaha Wakiillada, Farriina U Diray Xukuumadda Iyo Labadii Murrashax Ee U Tartamayay Guddoomiyaha.
Somaliland: “Siciid Maxamuud Gaheyr Waxa ‘ILAAHAY Ka Cabso’ Ku Xidhay Wasiirka Madaxtooyada” Barkhad Jaamac Xirsi.